सेक्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
आपसमा यौन सम्पर्क गर्दा महिलाले छुट्टै आवाज निकाल्छन् । आवाज त निकाल्छन् तर किन निकाल्छन् त यस्तो आवाज यो सबैका लागि रोचक विषय हुन सक्छ । आखिर अधिकांश महिला किन यस्तो आवाज निकाल्छन् ? के यस्तो आवाज आनन्दको अभिव्यक्ति हो या मनोरञ्जनको चरम अवस्था ?
यस बारेमा केही वैज्ञानिकले आवाज निकाल्नु नाटक मात्र हो भनेका छन् भने केही अनुसन्धानकर्ताहरूले आनन्दको अनुभूति हो भनेका छन् । साथै केहीले सेक्सको समयमा महिला अचेत अवस्थामा पुग्ने भएकाले यस्तो आवाज निकाल्ने जनाएका छन् । तर यसबारे पछिल्लो अनुसन्धानबाट निकालिएको निष्कर्ष भने अलि फरक छ ।
सेक्सको क्रममा यदि तपाइको पार्टनर उफ आह या आउच जस्ता आवज निकाल्छ भन्दैमा तपाइले यो सोच्नु भएन कि, उनले चरम सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहेका छन् । किनभने यो देखावटी मात्र पनि हुनसक्छ । सेक्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ?
यो पनि पढ्नुहोस डाः केसि २० ओै पटक अनसनमा बस्ने घोषणा
२१,असार.२०७६,शनिबार १४:२६ मा प्रकाशित
← आठ जनाको हत्या गरी फरार भएका कपिलवस्तुका मोस्ट वान्टेड नसिम खान पक्राउ